जीवनमा साँचो सफलता कसरी प्राप्त गर्न - Motivation for success
घर > प्रेरक ब्लग- way2inspiration.com > जीवनमा साँचो सफलता कसरी प्राप्त गर्न
पोस्ट जुन 9, 2018 एक. Bharadwaj
जीवनमा साँचो सफलता कसरी प्राप्त गर्न:
जीवनमा सफलता को बाटो के हो?
सफलता अर्थ के?
के हामी सफलता र सफलता को लागि मापन मापदण्ड विचार गर्नुहोस्।. 😉
तिनीहरूले सफलता को मात्र आधार हो, वा गर्न सक्छन् विफलता जीवनमा सफलता भन्दा पनि अर्थपूर्ण हुन? त्यहाँ सांसारिक मान्यता परे सफलता को एक गहिरो अर्थ र असफलता हुन सक्छ; साँचो अर्थमा, कहिलेकाहीं सफल एक विफलता गर्न कमसल छ, र कहिलेकाहीं खराब असफलता कुनै पनि सफलता भन्दा grander हुन सक्छ.
सफलता र असफलता लागि आधार उच्च आदर्श र महान लक्ष्य मा निहित छन्. एक, जो उच्च आदर्श सबै आफ्नो जीवन बसोबास र धेरै पटक असफल, अझै पनि सफल छलफल गरिनेछ, तर जो आफ्नो विचार सम्झौता एक सफल बन्न, अझै पनि असफल ठानेको गरिनेछ.
जीवन झूट मा सबै भन्दा ठूलो सफलता आफ्नो तागत पहिचान र तदनुसार उच्च प्रदर्शन मा कार्यहरू. साँचो उपाय सफलता तपाईं ध्यान र पूर्ण कार्यहरु पूरा गर्न सक्षम थिए कि निर्भर, पूर्ण जोस वा संग. हामी हुक वा Crook द्वारा एक निश्चित कार्य प्रदर्शन मा सफल यदि, तब सफलता सधैं haunt र हामीलाई चिल्नु जारी हुनेछ, किनभने हामी सफलता प्राप्त गर्न लायकको थिएनन्.
यस विपरीत, यदि हामी हासिल छैन सफल परिणाम, तापनि हामी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयास, हामी कार्य प्रदर्शन गहिरो सन्तुष्टि को एक भावना हुनेछ. सफलता पूर्ण उत्साह हाम्रो कार्यहरू मा खण्डमा.
त्यहाँ सफलता हासिल गर्न सक्षम थिए धेरै ठूलो स्वतन्त्रता लडाकूको भएको, तर यो आफ्नो जीवन मुल्यांकन गर्नु छैन. स्वतन्त्रताको लडाकु मानसिंह सफल गर्न सक्षम थियो; उहाँले मृत्यु दण्ड दिइएको थियो. पनि 'चन्द्र Shekhar आजाद, एक भारतीय क्रान्तिकारी, असफल भयो र स्वतन्त्रता को लागि भारतको संघर्ष लागि आफ्नो जीवन बलिदान थियो. Maharani महालक्ष्मी Bai र Tantya Tope भारत आफ्नो जीवनकालमा स्वतन्त्रता प्राप्त साक्षी सफल गर्न सकेनौं.
यी उत्कृष्ट प्राण आफ्नो जीवनकालमा चाहेको सफलता हासिल गर्न सकेनौं, तर आफ्नो असफलता बावजुद, तिनीहरूले उच्चतम आदर्श र जीवनमा लक्ष्य थियो किनभने तिनीहरूले सफल मान्छे मानिन्छ. तिनीहरूले स्थापित र आफ्नो जीवनमा उच्चतम आदर्श बाहिर किनभने तिनीहरूले हाम्रो श्रद्धाको र नमस्कार सबै योग्य छन्; तिनीहरूले धेरै क्रांतिकारियों आफ्नो बाटोमा हिंड्न इच्छुक थिए लागि भूमिका मोडेल भयो, जो भारतको स्वतन्त्रता लागि संघर्ष भरिएको थियो.
तुलनामा, जहाँ सफलता हासिल हुन सक्छ उदाहरण धेरै छन्, तर यो सफलता मनमोहक मानिन्छ छैन. कसैले भ्रष्टाचार मार्फत धन हासिल यदि, घूसखोरी, जुवा वा त्यसपछि आफ्नो सफलता मनमोहक मानिन्छ लुट्ने छैन. यी मानिसहरूले भौतिक सफलता प्राप्त गरेपछि पनि जीवनको परम लक्ष्य टाढा आवारा. तिनीहरूले जीवन 'उद्देश्य बुझ्न र जीवित कला मार्फत तदनुसार आफ्नो जीवन ढाल्नुहोस् गर्न असमर्थ छौं. त्यसैले, आफ्नो जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्न मा सफल र honorably सफल मानिन्छ बसोबास गर्ने व्यक्ति.
जीवन र प्रकृति हाम्रो बाटो मा धेरै अवरोध र चुनौतीहरू फेंक. हरेक दिन हामी नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न, र नयाँ समस्या विभिन्न परिस्थिति बाहिर खडा. हामी डराएको प्राप्त र यी चुनौतीहरूको र समस्या बाट भाग्नु पर्छ, वा हामी तिनीहरूलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, र एक कुशल योद्धा जस्तै तिनीहरूलाई सामना? हामीले निर्णय हामी सफल वा जीवन असफल मानिन्छ कि साबित हुनेछ. हामी जीवनको यी चुनौतीहरू सामना गर्दा हामी सफल छन्, र असफल हुँदा हामी डर बाहिर यी चुनौतीहरू देखि उम्कन वा तिनीहरूलाई बच्न तरिकाहरू प्रयास.
जीवनको महत्त्व escaping छैन
हामी जोगिन वा भाग्नु भने, त्यसपछि हामी कहिल्यै जीवन सफल गर्न सक्षम हुनेछ; हामी पूर्ण शक्ति यी चुनौतीहरूको सामना त नयाँ क्षमताहरु हामीलाई अङ्कुराउन. नयाँ अन्तरदृष्टि हामीलाई भित्र उभर, नयाँ उत्साह र उत्साह खडा, जुन हामीले सामना कठिन चुनौतीहरू सामना हामीलाई सहायता. जब एक विद्यार्थी पढ्न सुरु, उहाँले अक्षर सिकाइएको छ. त्यसपछि उहाँले व्याकरण सिक्छन्, अन्ततः एक भाषाबिद हुन्छ र त्यसपछि विजेता बन्नेछ.
उहाँले अर्को एक ग्रेड देखि उत्प्रेरित गर्छ रूपमा आफ्नो प्रश्न थप जटिल बन्न, तर पनि बढ्छ जवाफ यो आफ्नो क्षमता संग. साथै, आफ्नो व्यक्तित्व र आफ्नो बौद्धिक योग्यता बढ्दै राखन.
शरीर को क्षमता सीमित छ. शरीर सजिलै थकित हुन्छ र दिन को अन्त द्वारा निकास हुन्छ. मन को क्षमता शरीर भन्दा अझ ठूलो छ. हुँदा पनि शरीर fatigued हुन्छ, मन अझै पनि संघर्ष भइरहनेछ. त्यहाँ मन को त्यो भन्दा पनि ठूलो शक्ति छ - यो प्राण शक्ति छ. यो शक्ति परमेश्वरको आउँछ.
यो जीवन मा सफलता को साँचो स्रोत छ. एक योगी यो वास्तवमा थाह छ र त त्यो आफ्नो मन को कि आफ्नो शारीरिक बल संलग्न, त्यसपछि प्राण को संग मन गरेको क्षमताहरु जोडती, and thus connects with the capabilities of the God. In this manner, one can accumulate spiritual powers and prosperity in one’s life.